UK oo digniin deg deg ah u dirtay Muwaadiniinteeda Somalia kusugan, si gaar ahna uga digtay booqashada Somaliland. – Puntlandtimes
UK oo digniin deg deg ah u dirtay Muwaadiniinteeda Somalia kusugan, si gaar ahna uga digtay booqashada Somaliland.
June 14, 2018 W LAASCAANO
LONDON(P-TIMES) – Sidda lagu baahiyey warsaxaafadeed ay soo saartay dawladda UK ama Boqortooyada Ingiriiska waxaa shacabkeeda ay uga digtay in ay u safraan Soomaaliya, oo ay ku jirto maamulka Somaliland oo aysan horey uga soo saarin digniinahan oo kale.
UK waxay si gaar ah calaamad u saartay magaalooyinka Hargeysa & Berbera oo ay sheegtay in ay khatar weyn ka jirto, waxaana si adag looga digay digniinahan in ay taxadar muujiyaan shacabku.
Digiintu waxay sheegaysaa in ay dhici karaan weeraro Argagixiso oo ay abaabulayaan kooxaha xagjirka ah, ayna ku beegsan karaan muwaadiniinta UK iyo kuwa Reer galbeedka, waxayna ka dhici karaa ayaa la yiri in ay beegsadaan goobaha lays kugu yimaado.
Waxaa la faray Muwaadinintu in ay garowsadaan digniinaha oo ay muujinayaan taxadar badan, sidaas oo kale ay inta badan la socdaan xogaha iyo warbixinada uga imaanaya Lataliyaasha ammaanka, sidaas oo kale warbaahinta gudaha iyo tan caalamiga ah ayaa la faray in ay la socdaan si dhaw.
Argagixisada ayaa la sheegay in ay geysan karaan qaraxyo waa weyn oo ka dhaca Muqdisho & Somaliland, gaar ahaana Berbera iyo Hargeysa oo la sheegay in ay kamid yihiin meelaha laga welwelayo.
DAAWO:Muuse Biixi oo Boorama looga soo hanjabay & Xaalada oo adag xili….